तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
जेसीजका कार्यक्रममा नौलोपन देख्न सकिन्छ
अन्तर्वार्ता 74 पटक पढिएको
कात्तिक १७ गतेबाट २० गतेसम्म हेटौंडा जेसीजको आयोजनामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम हुँदैछ । हरेक वर्ष झैं यसवर्ष पनि विविध कार्यक्रमसहित जेसीज अभियानमा सक्रिय युवाहरु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुग्दैछन् ।
जेसीजमा सक्रिय युवाहरुले जेसीज सप्ताहलाई मुख्य चाडकै रुपमा मनाउने गरेका छन् । यसवर्षको जेसीस सप्ताह, आगामी दिनमा जेसीजले गर्नुपर्ने विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलपाबारे जेसीज सप्ताहका मूल कार्यक्रम संयोजक सन्देश डीसीसँग साझाकुरा दैनिकका संवाददाता सुवास बिडारीले गरेको कुराकानीको अंश ।
१) यसवर्षको सप्ताहको मुख्य फरक विशेषता के छ ?
जेसीज युवाहरुका लागि समाजसेवा गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो । जेसीज सप्ताह सम्पूर्ण जेसीजहरुले हरेक वर्ष आयोजना गर्नैपर्ने कार्यक्रम हो । हामीले प्रत्येक वर्ष नयाँ शैलीका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । यसवर्ष पनि तपाईले सोध्नु भएको जस्तै फरक कार्यक्रमहरु हामीले समावेश गरेका छौं । मंगलबारबाट सुरु हुने जेसीज सप्ताहको पहिलो दिनको कार्यक्रममा नै हामीले पृथक गरेका छौं । हरेक वर्ष हेटौंडा नगरमा आयोजना गरिने रक्तदान कार्यक्रमलाई यसवर्ष हामीले मनहरी गाविसमा आयोजना गर्दैछौं । मकवानपुरको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारीक केन्द्र भएकाले हामीले मनहरीलाई रोजेका हौं । देशभर रगतको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा हामीले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि लिएका छौं । त्यसैगरी हामीले फरक कार्यक्रममको रुपमा साइक्लिङ च्यालेञ्ज तथा हेटौंडा–११ थानाभ¥याङमा अवस्थित शंकरज्योति प्राविका करिब एकसय ५० विद्यार्थीलाई पुस्तक तथा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम पनि सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा राखेका छौं ।
२) जेसीज सप्ताह औपचारिकतामा सीतिम हुन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप गलत छ । सबै जेसीजले जेसीज सप्ताह आयोजना गर्नै पर्ने हुन्छ । हामी जेसीजमा आबद्ध भएका युवाहरुबाट समाजले धेरै आशा गरेका हुन्छन् । हामीले सोहीअनुसार सेवा त गर्न पक्कै पनि सक्दैनौ । त्यसैले पनि हामीलाई औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हामीले व्यक्तिको होइन विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा नियमका परिधिमा रहेर आफ्नो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने हुँदा औपचारिकतामा सीमित भयो भन्नु स्वभाविक पनि हो । हामी विभिन्न व्यवसायमा रहेका युवाहरु एकै थलोमा जम्मा भएर समाजलाई केही योगदान दिनुपर्छ भनेर लागि रहेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा यसरी आरोप लगाउनु गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले सप्ताहव्यापी कार्यक्रममालाई महानपर्वकै रुपमा हर्षोल्लासका साथ आयोजना गर्ने गरेका छौं ।
३) जेसीजले अब कार्यक्रममार्फत् समेट्नुपर्ने कुरा ÷ विषय के होला जस्तो लाग्छ ?
जेसीज युवाहरुको समूह हो । अहिले जेसीजले समाजमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । कुनै पनि संस्थामाथि चुनौती र अवसर दुवै हुन्छ । अहिले देशकै चुनौतीको रुपमा रहेको युवा बेरोजगार र लागूऔषधबाट माथि उठाएर समाजको अभिन्न अंगको रुपमा अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेतर्फ कदम चाल्न जरुरी छ । अहिले पनि जेसीजले गरेका कार्यक्रमहरु नौलोपन देख्न सकिन्छ । यो भन्दा पनि नयाँ शैलीका कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा हामी ल्याउन प्रयत्न गर्नेछौं ।
४) साइक्लिङ च्यालेन्ज गर्नुको उद्देश्य के हो ?
मकवानपुरमै पहिलो पटक हामीले साइक्ङि च्यालेञ्ज आयोजना गर्दैछौं । यसअघि पनि साइक्लिङ
रेसहरु भएपनि च्यालेञ्जकै रुपमा भने पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेका हौं । हामीले साइक्लिङ गर्नको कारण नो पेट्रोल नो प्रब्लम, ग्रीनसिटी हेटौंडा, स्वच्छ वातावरण तथा स्वास्थ्यका लागि यस किसिमको कार्यक्रम राखेका हौं । करिब १७ किलोमिटरको च्यालेञ्ज पूरा गर्ने सम्पूर्णलाई पुरस्कृत गरिनेछ । करिब ५० जना साइक्लिष्टहरुले सहभागिता जनाउने विश्वास हाम्रो छ । हामीले त्यसका लागि बुद्धचोकबाट कमानेहुँदै,
रंगशाला, चौघडा र पुनः बुद्धचोकको रुट समेत निर्धारण गरिसकेका छौं ।
५) स्लो मोटरबाइक प्रतिस्पर्धाले के सन्देश दिन खाजेको छ ?
‘छिट्टो गए भन्न सकिन्न । ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ,’ भन्ने भनाइलाई यथार्थतामा बदल्निका लागि सबैमा जनचेतना जगाउने सबैभन्दा उत्तम खेलका रुपमा हामीले यसलाई प्रतिस्पर्धालाई लिएका छौं । पछिल्लो समय युवाहरुमा स्पिडमा सवारी चलाउने दर बढ्दो छ । जसले गर्दै दिनदिनै विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । कयौंको ज्यान पनि गइरहेको छ । हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा युवाहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर यस प्रतियोगितालाई आयोजना गर्न लागेका हौं ।
६) जेसीज सप्ताहमा अन्य के कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन् ?
कात्तिक २० गते शुक्रबार समापन हुने जेसीज सप्ताहमा यसवर्ष मनहरी बजारमा रक्तदान, साइक्लिङ च्यालेञ्ज, अन्तर जेसीज वक्तृत्वकला, मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल, पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम, स्लो मोटरबाइक प्रतियोगिता तथा अन्य विविध कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।
७) अन्त्यमा ?
धन्यवाद साझाकुरा दैनिकलाई जेसीज सप्ताहबारे चासो राखेर म मूल कार्यक्रम संयोजकलाई केही शब्द राख्ने मौका दिनु भएकोमा । जेसीआई हेटौंडाका सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्य, सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरु र सातवटै कार्यक्रमका संयोजक ज्यूहरु र मलाई आफ्नो अमूल्य सल्लाहसुझाव दिएर यस सप्ताहलाई सफल बनाउन अहोरात्र खटेर सहयोग गर्नुहुने निवर्तमान कविन सांगामीलाई विशेष धन्यवाद् दिन चाहन्छु ।
र्इ-पेपर - साझाकुरा
२०७५ फागुन ४ गते
२०७५ फागुन ३ गते
२०७५ फागुन २ गते
२०७५ फागुन १ गते
२०७५ माघ २९ गते
प्रदेश ३ को हिउँदे अधिवेशन कहिले
उपमेयर कपको उपाधि १७ र १४ नम्बर वडाले जित्यो
पिताको स्मृतिमा बानियाँले दिए स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स
‘भ्यालेन्टाइन डे’लाई विकृत नबनाऔं
बाल अधिकारको सुनिश्चितता
प्राकृतिक सम्पदा सदुपयोग
सवाकरोड युनिट विद्युत् चुहावट
बालबालिका हराउने र बालबिवाह गर्ने क्रम बढ्दो
बढ्दो बलात्कारको चिन्ता
2419056	Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337